China Angle grinder, impact drill, hammer, li-ion drill, power tools ifektri abakhiqizi | Boda
Amathuluzi kagesi ajwayelekile kakhulu esiwabona emakethe anjengalawa ngezansi:
1.Ibhethri lelithium umshayeli oshajekayo / umshayeli oshajekayo: okulungele izimbobo zokumba ngaphakathi nangaphandle kwezikulufo, izinsimbi, izinto zobumba kanye namapulasitiki.
2. Umshini wokuphinda ugesi ongashajwa ulungele ukuvula nezikulufo. Ukubhola kungenziwa nangokhuni, insimbi, izinto zobumba nakuma-plastiki, noma ukutholwa komthelela esitini, kukhonkolo kanye nasetsheni.
3. Isikhwama esikhokhelwayo sisebenza ukugoqa ngaphakathi nangaphandle kobubanzi besayizi obucacisiwe, futhi singasetshenziswa ukuqinisa nokukhulula amantongomane ngaphakathi kobubanzi besayizi obucacisiwe.
4. Isando sikagesi esishajekayo silungele ukubhola umthelela ezitini, kukhonkolo nasetsheni. Futhi ungabhoboza izimbobo ngokhuni, izinsimbi, izinto zobumba nakopulasitiki. Umshini ofakwe ukulawula kwejubane kwe-elektroniki nemisebenzi eya phambili / ehlehlisayo nayo ingakhulula / iqinise izikulufo bese uthepha. Uhlobo lwe
5. Ukubhoboza ngesandla kukagesi kufanele ukubhola kupulasitiki, i-ceramic, insimbi nokhuni. Imishini efakwe ukulungiswa kukagesi nemisebenzi eya phambili / ebuyela emuva nayo ingazungeza futhi ibhoboze imicu. Uhlobo lwe
6. I-Impact drill ilungele ukubhoboza umthelela kwisitini, ukhonkolo kanye netshe. Futhi ingabhoboza izimbobo ngokhuni, izinsimbi, izinto zobumba nakopulasitiki. Amamodeli afakwe imishini yokulawula isivinini se-elekthronikhi nomsebenzi waphambili / obuyela emuva nawo angathukulula / aqinise izikulufu bese uthepha. Uhlobo lwe
7. Isando sokuprakthiza i-hammer singasetshenziselwa ukudonsa ukudlidliza kukhonkolo, odongeni lwezitini nasetsheni. Ngemuva kokuthi kucijwe umshini wokudlidliza, umshini ungasetshenziselwa ukubhoboza izimbobo ezinkuni, izinsimbi, izinto zobumba kanye namapulasitiki. Umshini onedivayisi yokulawula isivinini se-elekthronikhi kanye noshintshi wezitini omuhle / ongemuhle angavula / aphume izikrini noma imicu yokubhoboza. Umshini ofakwe umsebenzi wokusika ungaqhuba ukusebenza kwe-chiseling. Uhlobo lwe
8. Ipiki kagesi ilungele ukusikwa kukhonkolo, odongeni lwezitini, itshe ne-asphalt. Uma kufakwe izesekeli ezifanele, umshini ungasetshenziswa ukuthepha ngezikulufo noma ukuphazamisa izinto ezikhululekile. Uhlobo lwe
9. I-Angle grinder ilungele ukusika, ukugaya nokuxubha insimbi yokugaya netshe. Amanzi awavunyelwe ukusetshenziswa ngesikhathi sokusebenza, futhi ipuleti yomhlahlandlela kufanele isetshenziswe lapho kusikwa itshe. Kumamodeli afakwe izilawuli zogesi. Ukugaya nokupholisha kungenziwa futhi uma kufakwa izesekeli ezifanele kumishini enjalo. Uhlobo lwe
10.Umshini wokucwebezelisa ulungele ukupholisha insimbi netshe. Uhlobo lwe
11. I-grinder eqondile (enesondo le-emery efakiwe) ilungele ukugaya insimbi nokususa i-burr. Umshini onedivayisi yokulawula isivinini se-elekthronikhi ungafaka futhi ibhulashi, isondo lokugaya elinjenge-fan nebhande lokugaya emshinini ngejubane eliphansi. Uhlobo lwe
12. Umshayeli kagesi ulungele ukuvula / ukuphuma izikulufo nezimbobo zokubhola ngokhuni, insimbi, i-ceramic kanye nepulasitiki. Uhlobo lwe
13. Umshini wokuthepha ulungele ukushaya imbobo eqondile. Ngemuva kokufaka izesekeli ezikhethekile, ukuthepha okungaboni kungenziwa. 14. Ukubhangiswa komthelela kufanelekile ukuvula / ukukhipha izikulufo ngaphakathi kobubanzi besayizi obucacisiwe, futhi futhi kungaqinisa noma kuxegise amantongomane ngaphakathi kobubanzi obucacisiwe. Uhlobo lwe
15. Izikhebhe zikagesi zensimbi zilungele ukusika ishidi lensimbi, futhi ngeke zikhiqize ama-chips. Ungakwazi ukusika amajika kanye nemigqa eqondile. Uhlobo lwe
16. I-shear kagesi eqondile / i-punching shear efanelekile ukusika ipuleti yensimbi, futhi ipuleti lensimbi ngeke lishintshe futhi likhubazeke ngemuva kokusika. Ingasetshenziselwa umugqa oqondile wokusika, ukusika imbobo yangaphakathi nokunciphisa ukusika kwe-engeli okuncane. Uhlobo lwe
17. Isaha elidayile lingasetshenziselwa ukusika okuqondile okuqonde ubude nokusika okuqondile okuqondile. Uhlobo lwe
18. Umshini wokusika wephrofayili ungasika ipuleti lensimbi ngokuma nangokuqondile ngaphandle kokusebenzisa amanzi. Uhlobo lwe
19. Umshini wokusika amatshe ulungele ukusika noma ukusika ezintweni eziphezulu zamaminerali (njengemabula). Kuyadingeka ukusebenzisa umshini ebhentshini lomsebenzi ozinzile futhi usebenzise ikhava yokuvikela. Imishini enokumiswa okukhethekile nayo ingasetshenziselwa ukusika okumanzi. Akuvumelekile ukusebenzisa lo mshini ukusika izinkuni, upulasitiki noma insimbi. Uhlobo lwe
20. Umshini wokubamba odongeni
Ifakwe umhlahlandlela wesilayidi, ofanele ukusika noma ukugaya imisele ezintweni ezinokuqukethwe okuphezulu kwamaminerali (njengokhonkolo oqinisiwe, izindonga zezitini nendawo egandayiwe i-asphalt, njll.), Ngaphandle kokusebenzisa amanzi.
21. I-curvilinear ilungele ukusika izinkuni, ipulasitiki, insimbi, ibhodi le-ceramic kanye nenjoloba kokufakwa ngaphansi okuhleliwe. Ingasika umugqa oqondile noma i-bevel angle (kuye ku-45 degree angle).
22. Ifanele ukusika ipulatifomu yokusebenza ezinzile. Ingasetshenziselwa ukusika okuqondile okujikelezayo nokweqile noma ukusika okuvundlile. I-engeli yokusika ephezulu ye-oblique angle cutting ngama-degree angama-45. Uhlobo lwe
23. Umshini wokusika we-Latex ungasebenzisa lo mshini ukusika ubujamo obuhlukahlukene kuma-plastiki anegwebu, iraba elinamagwebu nezinto ezifanayo. Uhlobo lwe
24. Ama-sanders / trimmers / planers alungele ukugaya ukhuni, amapulasitiki, okugcwalisa kanye nezindawo ezidwetshiwe. Umshini onomsebenzi wokulungisa kagesi nawo ungaqhuba ukusebenza kokucwebezelisa. Uhlobo lwe
25. Isibhamu somoya esishisayo singasetshenziselwa ukugoba noma ukugoqa ipulasitiki, ukususa upende wakudala nepayipi elincishisayo lokushisa. Ngaphezu kwalokho, ingasetshenziselwa ukushisela, ukufaka amapayipi, ukuncibilika kweglue nokuncibilikisa amapayipi amanzi. Uhlobo lwe
26. Umtshina odongeni uyakwazi ukubona insimbi, ucingo, ukhuni nokunye. Uhlobo lwe
27. I-Laser rangefinder ingalinganisa ibanga, indawo nevolumu, futhi ikala ngokungaqondile ukuphakama. Uhlobo lwe
28. Insimbi yezinga le-Laser le nsimbi yokulinganisa ifanele ukukala nokuhlola imigqa evundlile neqondile.
Ukusetshenziswa kwe-angle grinder:
Isondo lokugaya elihlukile lingasetshenziselwa ukugaya insimbi okuhlukile, ukusika nokulwa nokugqwala;
2.Itshe lokusika itshe lingasetshenziselwa ukucubungula ithayela, itshe, ukhuni oluncane kanye ne-veneer (kuphephe kunokugawula izinkuni ku-angle grinder ngentambo encane yesarha);
Ukupholisha insimbi kungenziwa ngokushintsha isondo nokupholisha isondo.
I-1.Igxile ekubhoneni endaweni eqinile, ukhonkolo, netshe, kanye nesando esiningi semisebenzi kagesi. Ingasetshenziswa esikhundleni se-drill kagesi ejwayelekile kanye nepiki kagesi lapho ilungiswa endaweni efanele futhi ifakwe i-drill bit efanelekile.
I-Electric drill pickaxe: inomsebenzi omkhulu wokuthinta ngqo nokucekela phansi izinto, njengoba nje usebenzisa isando noshizolo ukusebenza, kepha ukusebenza ngempumelelo kuphakeme kaningi kunalokho okwenziwa ngezandla.
2.Umehluko omkhulu phakathi kwepikkaxes kagesi nezando zikagesi umehluko ngosayizi. Izando zikagesi ezinamandla amakhulu zingabhoboza izimbobo ezinkulu zibizwa ngokuthi izando zikagesi, ezifanayo ngokomgomo. Zombili izivivinyo zinomsebenzi wokuzungezisa nokukhanda.
I-drill yomthelela ingasetshenziswa njengebhodi ejwayelekile kagesi. Kukhona ukushintshwa kokushintshwa kuyo, okungaguqulwa kube ukubhola okujwayelekile nokubhola komthelela.
Amandla we-drill kagesi we-12V ahlukile kunalawo we-21V. Amandla we-12V mancane kunalawo we-21V.
1. Izinga lokukhishwa kwebhethri lokumba kagesi lihlukaniswe ngamazinga amaningi. Amandla we-12V drill aku-10C, futhi amandla ngokuvamile azungeze u-5C.
2. Amandla futhi ancike emandleni okukhipha, ngoba amandla okukhipha ka-21V aphezulu, noma ngabe i-current ingenkulu ngokwanele, ingaxhaswa ngamandla kagesi, ngakho-ke asikwazi ukusho nje ukuthi amandla awo ayafana yini, kodwa futhi kuya ngekhono labo lokumelana namandla kagesi.
I-BOSENDA inikeza uchungechunge lwamathuluzi kagesi, amakhasimende ethu amathuluzi kagesi avela e-EU, eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Yurophu, eMiddle East naseNingizimu South emazweni ase-Asia.
Ngemikhiqizo yamathuluzi wamandla amaningi, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.
Langaphambilini Insimbi ephephile, engashisi umlilo, ikhodi yokukhiya iminwe, zonke izinhlobo zokuphepha
Olandelayo: Iteyipu kagesi, itheyiphu yokushisa omlilo, ithephu ye-PVC, itheyipu yokuhlukanisa